နုပျို ED: ပုံပြင်ပို? (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
နုပျို ED: အအတ္ထုပ္ပတ္တိမှနောက်ထပ်? (2013)
ဆောင်းပါး - သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု.
ဤစာမျက်နှာကို ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအောင်မြင်စွာကုသပြီးအောင်မြင်သောကျွမ်းကျင်သူ ၁၅၀ ကျော် (ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခများ၊ ရောဂါဗေဒပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊
ဤဆောင်းပါးကိုထောက်ပံ့သည့်လေ့လာမှုပေါင်း ၁၁၀ ကျော်၏စာရင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားလင့်များသတင်းပို့လေ့လာရေး
အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်စာတမ်း - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
သုတေသီများအဆိုအရမြဲ ED များအတွက်လက်တွေ့ကုသမှုရှာကြံလူပျိုတို့အတွက် upswing ခြင်းဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲနေကြတယ် အသစ်သောသုတေသန ယခု အဆိုပါကျည်အောင်။ သူတို့ရဲ့ပညာရေး၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါထိုလူငယ်အီတလီ၏ 48 ရာခိုင်နှုန်းကို 40 ကျော်သူတို့အားသာ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကပြင်းထန် ED ရှိခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ယောက်ျားတွေ, ကျန်းမာသန်စွမ်းခဲ့ကြသည်ပိုမိုပါးလွှာနှင့်အဆင့်မြင့် testosterone ဟော်မုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
အတူစိတ်ထဲတွင်ဤဒေတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား ဤအတွေ့ရှိချက် ခွန်အားမရှိခြင်း (ပြင်းထန် ED) ၏နှုန်းထားများအစီရင်ခံရန်ပထမဦးဆုံးခဲ့ပြီးသောကျော်ကြား Kinsey လေ့လာမှုကနေ:
အသက်အရွယ်, ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အဘို့အ stratified 12,000 ယောက်ျားများ၏အသေးစိတ်အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးဒီလေ့လာမှုကနေရလဒ်များ, အသက်အရွယ်နှင့်အတူခွန်အားမရှိခြင်းတစ်ခုတိုးပွားလာမှုနှုန်းညွှန်ပြ။ ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ 1 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် 19 ရာခိုင်နှုန်းကို3နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 45 ရာခိုင်နှုန်း,7နှစ်အောက်အသက် 55 နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် 25 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်လျော့နည်းအဖြစ်ယောက်ျား၏အ 75 ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုးကားခဲ့သည်။
ဒီတော့ 1948 အတွက် 19 နှစ်အရွယ်နီးပါးဘယျသူမှမအောငျ ရှိ. , 45 အောက်မှာယောက်ျား3ရာခိုင်နှုန်းတက်၏ပြင်းထန် ED နှုန်းထားများရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သုတေသနအသစ်ကခုချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့ ED ကုသမှုခံယူဖို့လူငယ်တွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာဘာကိုရှာနေတာလဲဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ (ယောက်ျားအများစုသည်အကူအညီမတောင်းမီအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောပြuresနာများကြုံတွေ့ရသည်။ ) အလားတူစွာ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်၊ ဆွစ်ဇာလန်လေ့လာမှုလုလင်ကြောင်း 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေ့ရှိရ ED အချို့ကိုဒီဂရီကြုံနေရခဲ့ကြသည် (အသက် 19.58 ဆိုလို) ။
အဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သလဲ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း streaming, အစဉ်အဆက်-ဝတ္ထုရန်လွယ်ကူလက်လှမ်း: လူပျို၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းနှစ်ဦးစလုံးသမိုငျးတှငျပထမဦးဆုံးအကြိမ်အခမဲ့နှင့်အင်အားစိုက်ထုတ်ဖြစ်ကြသည်။ အခုအသစ်အဖြစ်မှန်အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့်အားနည်းစိုက်ထူဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်စိတ်ရောဂါပညာရှင်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအကြောင်းသတိပေးနှိုးဆော်မှုများပြုလုပ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီကိုကြည့်ပါ porn-induced ED အပေါ် "ဒေါက်တာ Oz" အစိတ်အပိုင်း. အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူ အညီအမျှစိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။
On ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖိုရမ်များ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားနှစ်ပေါင်းများစွာတက်သည် piling ထားပြီး: porn-သွေးဆောင် ED, DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) နှင့် PE ၏တိုင်ကြားချက်။ လုလင်တို့သည်လည်းအဆိုပါအစီရင်ခံကြသည် အတုအော်ဂဇင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် နှင့်ကြီးထွားလာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-တိုးမြှင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုအားထား။ အဆုံးစွန်သောဆောင်းပါးကြောင်းသတင်းပေးပို့:
Harley Street, psychosexual တိုင်ပင် Raymond Francis ကသူ Viagra အပေါ်မှီခိုခံစားရသူကို 15 ယောက်ျားတစ်ဦးတစ်လအကြောင်းကိုရှုမြင်ကပြောပါတယ်။ ပျမ်းမျှအသက် 32 အကြောင်း - မိမိအငယ်ဆုံး client ကိုဖွင့် 27 ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ခါးပတ်အောက်တွင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများခံစားနေရသောယောက်ျားများသည်များသောအားဖြင့်ဆေးပြားများစိုက်ထူလျှင်ပင်စစ်မှန်သောအပျော်အပါးကိုခံစားမိကြလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေစဉ်တခါတရံဆေးလုံးများသည်အလုပ်မလုပ်တော့ဟုသတင်းပို့ကြသည်။ သူတို့၏ပြissueနာသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်အားပျော့ပျောင်းသောပျော်ရွှင်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပုံရသည်။
သတငျးကောငျးကိုလူတို့သညျအငျတာနကျ porn အသုံးပြုမှုကိုအရှုံးမပေးသည့်အခါသူတို့၏လိင်ပိုင်းအလုပ်မဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တချို့ကသို့သော်လအတွင်းလိုအပ်ပါတယ်နှင့် လုလင်တို့သည်လည်းပိုရှည်လိုအပ် (သူတို့ streaming များညစ်ညမ်း overconsuming စတငျမီလိင်ပူးပေါင်း၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ဝါယာကြိုးမှတော်မှာသူ) အသက်ကြီးထက်သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအောင်မြင်ရန်။ တိုတောင်းသောများတွင်ထိုလူငယ်ယောက်ျားတွေဖြစ်ပေါ်လာ အေးစက်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် (voyeurism လော POV? အဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း?) အစောပိုင်းကသားစဉ်မြေးဆက်မကြောင့်နည်းလမ်းတွေပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု: လုလင်တို့သည်သွေးကြောယိုယွင်းသို့မဟုတ်အထက်အမျိုးသားများတွင် ED ဖြစ်ပေါ်စေလေ့သောအခြားရောဂါများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းကလူပျိုတို့အတွက်ပညာရေးလေ့လာနေအများဆုံးသုတေသီများရှင်းပြချက်အဘို့ကျန်ရှိနေသောရိုးရာအကြောင်းတရားများမှကြည့်ဖို့ဆက်လက်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အထများနှစ်ပေါင်းများစွာအမျှတိုးလာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်လူပျိုတို့အတွက်ဆေးလိပ်တစ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ် အနိမ့်အားလုံးအချိန်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု နှင့် မူးရူးသောက်စား ဒါ့အပြင်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ကျဆင်းသွားပါပြီ။
စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများသည်လည်းအလားအလာရှိသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတုန့်ပြန်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိဆရာဝန်အများစုသည်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းအဖြစ်မစဉ်းစားကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူနာတွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေးခဲ့ဘူး။
သို့သော်ဆီးရောဂါပါရဂူ လောရင့်အေအပြုံးပုံ, MDသူသည်ယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကို ၁၈ နှစ်ကြာအထူးပြုခဲ့ပြီး၊ သူသည်ယောက်ျားများကိုနေ့တိုင်းလိုလိုမြင်ကြောင်း၊
... အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအကောင်းတစ် ဦး အစိုင်အခဲစိုက်ထူရဖို့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့မနိုင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဒီလူတွေကိုသူတို့ကြည့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ထူမှုနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေဟာသူတို့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာလေ့ရှိတယ်။
အောက်ခြေလိုင်း အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းသောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည် ED ကိုအသုံးပြုသူများသည်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဆရာဝန်နှင့်ပြသင့်သည်။ အကယ်၍ အရာရာတိုင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါက၊ သူတို့သည်နာတာရှည်ဖြစ်စေ၊ ဤတွင်အကြံပြုချက်မှာ - အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး သည် porn ဖြင့်စိုက်ထူနိုင်သော်လည်း၎င်းမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်းသူ၏ပြissueနာသည် porn-related ဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုအတောအတွင်းတဦးတည်း ငယ်ရွယ်စိတ်ရောဂါ (သူကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်) ကဆေးပညာသည်လူငယ်အသုံးပြုသူများ၏လိင်မှုနှင့် ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြည့်အဝမမှီမီဆယ်စုနှစ်များစွာကြာနိုင်လိမ့်မည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်။ သူကထောက်ပြသည်မှာလိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ဆေးများအတွက်ငွေအမြောက်အများရှိပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်ဤစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောကျန်းမာရေးပြproblemနာကိုခံစားနေရသောလူငယ်ခံစားနေရသောသူများအတွက်အမူအကျင့် (ဆိုလိုသည်မှာအခမဲ့) အဖြေရှိကြောင်းဖော်ပြမည့်သုတေသနကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်မက်လုံးမရှိကြောင်းသူထောက်ပြသည်။ ။